FTTB Optical Inogamuchira Vagadziri & Vatengesi | China FTTB Optical Mugamuchiri Fekitori
Imba Optical Inogamuchira
Zvimiro 1.RF inoburitsa nhanho inoshandiswa Optical Automatic Gain Control (AGC), chero Optical node mune imwe yeinternet network, kana iro chete simba remagetsi riri mukati -7dBm ~ + 2dBm. yemuchina uyu, tinogona kuve nechokwadi chekuti chiyero chemuchina wese chinoramba chakangofanana, uye CTB & CSO inoramba isina kuchinjika, zviri nyore pakubvisa chirongwa. 2.Operation chikuva chakagadzirwa xx ~ 1000MHz. 3.Low-ruzha gudzazwi enzanirana redunhu uye gudzazwi ...
Zvimiro 1.PIN fotoelectric yekushandura chubhu ine yepamusoro kudavirira; 2.Ratidza simba remaziso zvakajeka kuburikidza negumi-kirasi tambo-mhando luminescent chubhu; 3. 4.RF kudzvanywa uye kuenzana zvese zvinoshandisa zvinoramba zvichishandisika dhizaini, izvo zvinoita kuti injinjini debugging ive nyore kwazvo; 5.Power goho M ...
ZBR1002B Kunze Bidirectional Optical Mugamuchiri
Zvimiro 1.Maviri ekushanda wavelength ye1310nm uye 1550nm; 2.750MHz uye 860MHz sarudzo; Simba reVariety rinosarudzika: AC60V, AC220V, dC-48V uye ect; 4.A akasiyana-siyana anoshanda plug-in zvikwata: plug-in attenuator, plug-in equalizer, plug-in bazi rekuparadzira uye kudzoka nzira yekuparadzira module inochinja mukugadzirisa. Shandisa dhizaini yemapulagi-muzviyuniti zvakakunakira kugadziridzwa kwenetiweki; 5.Good-yemhando GaAs inosimudzira module inogona kusangana nezvinodiwa zveyero yepamusoro kuburitsa; 6.International advan ...
Pfupiso ZBR200 ndiyo yedu yazvino yepamusoro-kirasi CATV network Optical inogamuchira. Ichi chishandiso pre- kirasi inotora Yakazara-GaAs MMIC inosimudzira chishandiso. Mushure-kirasi ndeyeAmerican ACA Kambani Chip GaAs inosimudzira. Optimized wedunhu dhizaini inoita kuti zvishandiso zviwane zvakanaka mashandiro indekisi. Microprocessor kutonga, dijitari inoratidza iwo ma parameter, iyo yekugadzirisa madhizagi iri nyore nyore. Ndiyo midziyo mikuru yekuvaka CATV network. Zvimiro 1) Yakakwira mhinduro PIN photoelectric yekushandura chubhu. 2) Zvakanaka ...